काठमाडाैं । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको सवारीमा ट्रायल दिने व्यवस्था हट्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै आफ्नै सवारीमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थ ागर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आदेश दिएको छ । साथै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको ५००...
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयको मार्गचित्र तयार भएको छ । मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्रतिवेदनले राखेको छ । उक्त प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक हुने...
काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले शतप्रतिशत भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ती ठूला विद्युत गृहहरुले लक्ष्य भन्दा बढी अर्थात् शतप्रतिशत भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ सय ६५ मेगावाट बराबरको १६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । यस...
काठमाडौं । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरुलाई राष्ट्रबैक मार्फत् अनुगमन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारीको अनुगमनलाइै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनको लागि सम्बन्धित कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०३७मा तोकिएको रकम भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्रबैंकमार्फत् अनुगमन गर्न प्रस्ताव गरिएको समाचार सोमबारको...
तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान रेलबाट ल्याउन दिने विषयमा भारत सकारात्मक
काठमाडौं । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुले कोलकत्ता बन्दर्गाहबाट ल्याईने तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानलाई रेलमार्गबाट नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गरिएका सामानहरु नेपाल ल्याउन नपाउँदा व्यवसायीहरुले ढुवानीमा नै धेरै खर्च गर्नपरिरहेकोले सामानलाई रेल मार्गबाट ल्याउनसक्ने व्यवस्था मिलाउने...
अख्तियारकाे छानविन सूचिमा काे काे ?
काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्कीको वहिर्गमनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनेका द्वीप बस्न्यातले ठूलो माछाको खोजी गर्न थालेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले तामेलीमा राखेका फाइलहरु प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले फुकाउन थालेपछि नेपाल सरकारका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको निदहराम भएको छ । गत जेठ १९ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक...
नगद लाभांश वा बोनस शेयर, कुन उपयुक्त ? लाभांश वितरणका लाधारमा कसरी लगानीका लागि कम्पनी छान्ने ?
अधिकांश शेयरधनीले नगद लाभांशभन्दा बोनस शेयर रुचाउँछन् किनभने यसले तुरुन्तै शेयर बेचेर नगद लाभांश लिने वा भविष्यमा हुने मूल्यवृद्धिबाट लाभ लिने, यी दुवै विकल्प खुला गर्दछ कुनै पनि कम्पनीले शेयर निष्काशन गरेर सर्वसाधारणलाई सो कम्प्नीकाृ नाफा नोक्सानमा सहभागी गराउँछ । कम्पनीले हरेक वर्ष त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दै...
शेयरबजारमा १७०५७, ०५८ र ०५९ आतंक, यसरी फस्यो नबिल इन्भेष्टमेण्ट, बोर्डले देखायो सक्रियता
एउटै आवेदन नम्बरबाट धेरै फाराम संकलन गरी बाँडफाँड प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको भन्दै साना लगानीकर्ताहरुले उजुरीमार्फत् बोर्डसमक्ष आग्रह गरेपछि अनुसन्धान थालिएको बोर्डका सहप्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए । काठमाडौं । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले निष्काशन गरेको साधारण शेयर बाँडफाँडमा अनियमितता भएको भन्दै परेको...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई किन दियो इक्राले ग्रेड २+ रेटिङ, यस्ता छन् बैंकका भावी सम्भावना
एफपीओले ग्रेड २+ पाउनुमा बैंकको ७५ प्रतिशत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको हिस्सा रहेको, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड यूकेसँग प्राविधिक सेवा सम्झौता भएको र बैंकको सञ्चालनमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको रेखदेख र सञ्चालन अभ्यासहरु प्रयोग गरिएकोलाई राम्रो पक्षका रुपमा लिइएको छ । काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले निष्काशन गर्न लागेको...
नगरकोटमा २२ बर्षीय युवतीको शव भेटियो
भक्तपुरको नगरकोट नगरपालिका ११ मुहानपोखरीमा पुरिएको अवस्थामा एक युवतीको शव भेटिएको छ। करिब २२ वर्षकी पहिचान खुल्न नसकेकी युवतीको पुरिएको शवको हात देखेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ । युवतीको शव हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । युवतीको हत्या गरी शव त्यस स्थानमा ल्याएर...
वाणिज्य बैंकहरुको नाफा रु् २० अर्ब ८४ करोड, कसले कति बढाए ?
सो अवधिमा प्रभुको नाफा १ सय ७४ दशमलव २१ प्रतिशत बढेको छ भने कृषि विकास बैंकको नाफा १ सय ३३ दशमलव ९७ प्रतिशत बढेको छ । काठमाडौं । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा नेप्सेमा सूचीकृत २५ वाणिज्य बैंकहरुले कुल रु. २० अर्ब ८४ करोड खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा बैंकहरुको यस्तो नाफा रु. १४ अर्था ५० लाख रहेको थियो । सो बैंकहरुको सञ्चालन...
सर्वसाधारणलाई एउटै कम्पनीमा ७ अर्बको शेयर लगानी अवसर, यस्ता छन् प्रावधानहरु
हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरुले दिँदै आएका शेयरमा नागरिकले आईपीओ, हकप्रद वा एफपीओ मात्र पाउँदै आएका थिए । काठमाडौं । तिला १(४४० मेगावाट) र २(४२० मेगावाट) जलिविद्युत आयोजनामा कर्णलीवासीको लगानीका लागि कम्पनी तयार रहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजरपछि उक्त लगानीका लागि शेयर खुला गर्नेछ । ‘जनताले लगानी गर्छु भन्छन् भने रोक्ने...
अब सीसीडी रेसियोको सीमा ८७ प्रतिशत !
विपन्न वर्ग कर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्थाले साढे ७ प्रतिशतभन्दा धेरैको सीसीडी लचकता हुन्छ । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप(सीसीडी) अनुपातको सीमा अप्रथ्यक्ष रुपमा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो कसिलो भएपछि कर्जा प्रवाह गर्न कठिन भएकाले...
हकप्रदको आशमा लगानी गर्न खोज्नेहरु सावधान ! कडाइ गर्दैछ राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशनमा अब
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा संस्थापकले बैंकबाट ऋण लिएर हकप्रद हाल्ने काम बढी गरेको पाइयो ।’ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशनमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले ल्याए पनि शेयर बजार बढेका कारण धमाधम हकप्रद शेयर आउन थालेपछि...